7 သင်လက်မှတ်မထိုးမီသင့်အေဂျင်စီအားမေးမြန်းရန် Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, နိုဝင်ဘာလ 23, 2014 တနင်္ဂနွေ, နိုဝင်ဘာလ 23, 2014 Douglas Karr
အခြားအေဂျင်စီများနှင့်အလုပ်လုပ်ရတာကိုနှစ်သက်ပါတယ်။ ရှာဖွေရေးယန္တရားနှင့်အကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အေဂျင်စီမိတ်ဖက်များအားလုံးအတွက်အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်း၏အစိတ်အပိုင်းကိုလည်းဆက်လက်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဒီဇိုင်းနှင့်ပြည်သူလူထုနှင့်သက်ဆိုင်သောရှေးရှေးများစွာတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြပြီး၎င်းတို့အားလုံးနှင့်တူညီသည့်အချက်မှာစီးပွားရေးရလဒ်များကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။
စီးပွားရေးရလဒ်များမရှိပါကသင်၏အေဂျင်စီသည်အရေးမကြီးပါ။ ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အကောင်းဆုံးဆိုဒ်ကတော့အသုံးမ ၀ င်ပါဘူး။ ရှာမရသောလှပသော site တစ်ခုသည်အသုံးမကျ။ သင်ပြန်လည်ထည့်သွင်း။ မရနိုင်သည့်အတွက်သင်အကြီးအကျယ်ပေးဆပ်သည့်သုတေသန၊ ဒီဇိုင်းနှင့်ရေးသားခြင်းသည်အသုံးမ ၀ င်ပါ (ကန ဦး ထုတ်ဝေမှုထက် ကျော်လွန်၍) ။
ကျွန်ုပ်တို့ထံလာသည့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအများစု၏ဘတ်ဂျက်အားလုံးနီးပါးကိုကုန်ဆုံးခဲ့သော်လည်းရလဒ်များကိုသဘောမပေါက်သောသူများကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲတစေအံ့အားသင့်စေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်သည်မှာကျန်ရှိသည့်မည်သည့်ရန်ပုံငွေကိုမဆိုယူပြီးရလဒ်ရရှိရန်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုအလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးပုံစံသည်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အနည်းငယ်ထူးခြားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြားချပ်ချပ်ကြေးပေးရသောတာဝန်ခံမှုများကိုကောက်ခံပြီးနောက်ရလဒ်များအတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အများစုသည် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး တည်း၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုဖြုန်းတီးနေသော်လည်းတိုင်းတာနိုင်သောစီးပွားရေးရလဒ်များရရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားလုံးအလုပ်လုပ်ကြသည်။
သင်၏လုပ်ငန်း၌အခြားမည်သည့်ဖောက်သည်များနှင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့သနည်း။ ငါပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့ပconflictsိပက္ခတွေကိုငါတောင်းဆိုနေတာလို့သင်ထင်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ဘူး။ ငါတို့ ကိုယ်စားလှယ်ရုံး စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာနှင့်ဆက်စပ်သောကုမ္ပဏီများနှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်အောင်မြင်မှုရရှိနေသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ B2C ထုတ်ကုန်ကုမ္ပဏီများနှင့်ပြတ်တောက်သွားသည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုအာရုံစိုက်ပြီး၎င်းတို့အပြင်ဘက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်လိုသူမည်သူမဆိုသည်သူတို့၏မျှော်လင့်ချက်များကိုပြည့်မီစေရန်သေချာစွာအသိပေးထားခြင်းခံရသည်။
အရင်းအမြစ်ဖိုင်များကိုဘယ်သူပိုင်ဆိုင်သနည်း။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့ရသောအကြီးမားဆုံးပြproblemနာဖြစ်သည်။ အေဂျင်စီသည်သင်လိုအပ်သမျှကိုဒီဇိုင်းဆွဲလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်အရင်းအမြစ်ဖိုင်အားလုံး၏ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ သင်အလုပ်ကိုပြန်လည်နေရာချထားချင်ပါသလား သင်အေဂျင်စီကိုမေးမြန်းရမယ်။ သင်အေဂျင်စီမှထွက်ခွာချင်ပါသလား ပြီးရင်ပြန်စရပါမယ်။ အလွန်စိတ်ပျက်စရာ။ သင်၏ဖောက်သည်အားဓားစာခံထားခြင်းသည်သင်၏စီးပွားရေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်သည်မဟုတ်ပါ။
အလုပ်မလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ အေဂျင်စီတိုင်းသည်သူတို့လုပ်သောအလုပ်ကိုတိုးမြှင့်ကြသည်။ ငါတို့မှာလည်းရှယ်ယာရှိတယ်။ မေးခွန်းကဘာဆက်ဖြစ်မလဲ။ သင်တစ် ဦး သည်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေလျှင်သင်လိုအပ်သောအရာများကိုရယူရန်အတွက်လက်ရှိအေဂျင်စီတစ်ခုသို့မဟုတ်အသစ်တစ်ခုနှင့် ထပ်မံ၍ ငွေထပ်မံပေးရလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ပြားချပ်ချပ်အခကြေးငွေအလုပ်လုပ်ဒါဖိအားပေးကျွန်တော်တို့ကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏။ နှင့်အဆိုးဆုံးမြင်ကွင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများက၎င်းတို့သည်သူတို့လက်မှတ်ထိုးခြင်းမပြုမီကျွန်ုပ်တို့၏စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုကိုမည်သို့အဆုံးသတ်ကြောင်းကိုလည်းသိကြသည် (ကျွန်ုပ်တို့မဟာဗျူဟာ၊ အစီရင်ခံခြင်း၊ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအပြည့်အဝလည်ပတ်သည်။ )
ဘာတွေပါလဲ ပရောဂျက်သည်မိုဘိုင်းအတွက်အဆင်ပြေအောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်းကုမ္ပဏီများမှဆိုဒ်များသို့မဟုတ်နည်းဗျူဟာများမည်မျှထုတ်လွှင့်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ စိန်ခေါ်ခံရသောအခါအေဂျင်စီက“ မင်းဒါကိုမမေးခဲ့ဘူး” ဟူ၍ တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ဟမ်လား သင်လေးလေးနက်နက်ပြောတာလား? သင်၏အေဂျင်စီသည်သင်၏ဖောက်သည်များကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကစီးပွားရေးရလဒ်များကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အရာခပ်သိမ်းကိုပြုလုပ်ရန်သင်တောင်းဆိုလိမ့်မည်။
ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပိုင်ဆိုင်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲသလဲ? သင့်တွင် domains များ၊ hosting များ၊ themes များသို့မဟုတ် stock photography တို့ကိုဝယ်ယူသောအေဂျင်စီတစ်ခုရှိပါကအဆင်ပြေပါသည်။ သို့သော်၎င်းတို့ကိုမည်သူပိုင်ဆိုင်သနည်း။ တုန့်ပြန်မှုမရှိခြင်းနှင့်သင်၏ဒိုမိန်းနှင့်အတူလမ်းလျှောက်ခြင်းမှအေဂျင်စီတစ်ခုထက် ပို၍ ဆိုးသည်မှာ (ဟုတ်ပါသည်၊ ဖြစ်ဆဲ) ။ သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုသည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြောင်းသံချပ်အင်္ကျီချုပ်ဆိုထားသည့်နေရာတွင်သေချာစွာထားပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များထံမှအကြွေးဝယ်ကဒ်ကိုရယူပြီးသူတို့၏အမည်ဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဝယ်ယူလေ့ရှိကြသည်။ သင်၏အေဂျင်စီကိုသင်ထပ်ထည့် / ဖယ်ရှားနိုင်သည့်အုပ်စုလိုက်အီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုရှိခြင်းသည်ဘယ်သောအခါမျှမပျောက်ဆုံးနိုင်သောထိုအကောင့်များကိုစီမံရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အဘယ်ကိရိယာများကိုသူတို့အသုံးပြုနေသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များအတွက်အချို့သောပလက်ဖောင်းများကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်တံဆိပ်တပ်ထားသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သုံးစွဲနေသည့်ကိရိယာများအပေါ်တွင်၎င်းတို့သည်ပွင့်လင်းရိုးသားဆဲဖြစ်သည်။ အေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်ခြင်း၏အားသာချက်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ငန်းသုံးလိုင်စင်များကို ၀ ယ်သူအများအပြားအတွက်အသုံးပြုသော software ပေါ်တွင်ဝယ်ယူခြင်းဖြစ်သည်။ တစ် ဦး တည်းအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်၎င်းတို့ကိုမတတ်နိုင်ကြပါသော်လည်း စုပေါင်း၍ ၎င်းတို့အား ၀ င်ရောက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောတန်ဖိုးကိုနားလည်ရန်သာမကမိမိတို့အသုံးပြုနေသောကိရိယာများ၏အရည်အသွေးနှင့်ဂုဏ်သတင်းကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်သိမြင်စေသည်။
သူတို့ကသင့်ကိုဘယ်လိုကူညီနိုင်သေးလဲ။ ကောင်းပြီ - ငါအခုချိန်မှာအပျက်သဘောဆောင်နေပြီ၊ အေဂျင်စီ၏ခါးပတ်အောက်ရှိစွမ်းရည်များနှင့်စီမံကိန်းများ၏ကျယ်ပြန့်သောကြောင့်သင်တစ်ခါတစ်ရံသင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အမှားဖြစ်သော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့၏ရှိပြီးသား client သည်၎င်းတို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ပြီးမြောက်နိုင်သည့်အလုပ်အတွက်အခြားအရင်းအမြစ်တစ်ခုကိုသာငှားရမ်းခဲ့သည်။ ပိုပြီးစိတ်ရှုပ်စရာဘာမှမရှိဘူး! သင်၏အေဂျင်စီများနှင့်သူတို့ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ဆောင်နေသည့်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောအလုပ်များနှင့်အခြားကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများအကြောင်းကိုသေချာစွာပြောပါ။ သင်၌ဆက်ဆံရေးရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်စီမံကိန်းများကိုထည့်သွင်းခြင်းသည်အရင်းအမြစ်အသစ်နှင့်အသစ်စတင်ခြင်းထက်များစွာလွယ်ကူသည်။
တစ်ခါတစ်ရံရယ်စရာသတင်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေလိုက်သည် ကြမ်းတမ်း client ကိုဆက်ဆံရေး ကြောင်းအေဂျင်စီများသို့ရ။ သို့သော်အလွဲသုံးစားမှုသည်မည်သည့်ဆက်နွယ်မှုကိုမဆိုအဆုံးသတ်နိုင်သည်။ သင်၏အေဂျင်စီကသင်အလွဲသုံးစားမပြုရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ မင်းရဲ့နည်းဗျူဟာတွေထိခိုက်ရုံသာမကမင်းရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းဆုံးရှုံးနိုင်တယ်။
ငါဒီတစ်ခုလုံးကိုမေးခွန်းတစ်ခုမှာအနှစ်ချုပ်နိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ သင်၏စီးပွားရေးရလဒ်များကိုသေချာစေရန်သင်၏အေဂျင်စီသည်လုပ်ဆောင်နေပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအကျိုးခံစားရသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့လည်းအကျိုးရှိသည်။
ဗီဒီယို - သင်၏အီလက်ထရွန်းနစ်ရောင်းဝယ်ရေးစတိုးဆိုင်ကိုနာရီဝက်ခန့်စတင်ပါ
27:2014 pm မှာနိုဝင်ဘာ 3, 16
ဒါကြောင့်မနက် ၂ နာရီလောက်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်တဲ့သူအားလုံးကိုညလုံးလုံးအီးမေးလ်ပို့ပြီးတစ်ညလုံးကျွန်တော်မပို့ခဲ့ဘူး၊ ဆုတောင်းရင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်လွှင့်တင်ခဲ့သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုနှင့်အကျိုးအမြတ်မယူသည့်လူတစ် ဦး ဂိုဏ်းတစ်ခုအနေဖြင့်အီးမေးလ်ကိုကျွန်ုပ်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ Doug အားဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သည့်အချက်သည်လူအများရှေ့တွင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သူ၏စာမူသည်သမာဓိ၊ ကျင့် ၀ တ်နှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတို့ကိုထင်ဟပ်စေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ဖေ့စ်ဘွတ်မတက်မီ“ အသေးစားအင်ဒီယာနား” ကိုတက်ကြွစွာထောက်ခံခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်ပထမ ဦး ဆုံးဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ နှလုံးရောဂါဖြင့်အစောပိုင်းအငြိမ်းစားယူခြင်းနှင့်ပြန်လည်နာလန်ထူလာခြင်းကဘုရားသခင်နှင့်ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးအခန်းသို့ ဦး တည်သွားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ ၁၀ ပေါင်သည်အငြိမ်းစား Havanese မျိုးဆက်ပွား Soulmate၊ လူမှုဖူလုံရေးနှင့်ကျွန်ုပ်၏ပစ်ကပ်ထက်မိုင်အကွာအဝေးများပိုမိုသောကွန်ပျူတာတစ်လုံးဖြစ်သည်။ eBay သည်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းလုပ်ငန်းသစ်မဟုတ်ကြောင်း၊ သို့သော်မကြာမီတွင် eBommerce သည်ကုန်သွယ်ရေးကုန်သည်ကြီးများအသင်းနှင့်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သော်လည်းလွတ်လပ်စွာပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့်အင်ဒီယားနားအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီများနှင့်သာအလုပ်လုပ်ခွင့်ရခြင်းကဲ့သို့သောဘဝအတွေ့အကြုံများကကျွန်ုပ်သည်အီးကောမတ်စ်ကိုနှစ်သက်သည်။ ကျွန်ုပ်၏စီမံကိန်းသည်စိတ်အားထက်သန်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်၏ကြိုက်နှစ်သက်မှုနှင့်လေးစားမှုကိုလည်းရရှိခဲ့သည် Douglas Karr မိမိအလူမှုမီဒီယာတင်အဖြစ်သူ၏ဘလော့ဂ်များမှတဆင့်။ သူသည်သူ၏ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုသည် Doug ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနည်းတူသူ့အတွက်ဆွဲဆောင်မှုမရှိကြောင်းသူသတိမထားမိပါ။ ပြီးပြည့်စုံပြီးနာမည်ကောင်းသည့် Geeker နှင့်ထိုကဲ့သို့သောဆွေမျိုးတစ် ဦး ကိုကွန်ပျူတာမှမွှေနှောက်တွေ့ရသည့်အနေနှင့်သင်မကြာခဏခံစားရသည့်တစ်စုံတစ် ဦး သည်ရာသက်ပန်မိတ်ဆွေနှင့်လမ်းညွှန်ဖြစ်သည်ဟူသောခံစားချက်သည်ဤနှစ်များအတွင်းနှစ်ကြိမ်မျှဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ သူသည်သူ၏ဘလော့ဂ်များနှင့်လူမှုမီဒီယာပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုအွန်လိုင်းတွင်မည်သို့တွေ့သည်ကိုသူသိသည်။ ထို့ကြောင့်သူ့ကိုမကြာခဏတွေ့မြင်ရခြင်းသည်သူအမှန်တကယ်ပင်သဘောတူညီချက်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းသေချာရန်မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြိုက်နှစ်သက်မှုများနှင့်မနှစ်သက်မှုများစွာကိုဝေမျှသော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်သဘောမတူသော၊ (ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပြူတာပိုင်ရှင်အသိပညာမရှိဘဲ ၀ န်ချတောင်းပန်ခြင်းခံရသည်ကိုသတိရပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်မျှတသောဘာရိုမာတာမဟုတ်ပါ) သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာရေး၊ ကိုယ်ကျင့်တရား၊ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်နိုင်ငံရေးရှုထောင့်များသည်အများအားဖြင့်အနီးကပ်ဆက်စပ်နေပြီးသူ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထင်မြင်ချက်များနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များကိုလက်ခံရန်ယုံကြည်မှုဖြစ်လာသည်။ ဒါဟာကျေးဇူးတုံ့ပြန်ခြင်းနှင့်ဘလော့ဂ်အတွင်း၌ဤပွင့်လင်းမြင်သာသည်နောက်တဖန်သင်တို့ကိုကျေးဇူးတင်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကျေးဇူးတင်စကားတစ် ဦး sliver ဝေမျှဖို့ငါ့ကိုဆောင်တတ်၏။